Biyo Xireenka Turkwel oo qaarka uu saaran in uu fatahaad sameeyo. – iftiin fm
Biyo Xireenka Turkwel oo qaarka uu saaran in uu fatahaad sameeyo.
October 17, 2020 October 17, 2020 Iftiin FM Reporter 0 Comment
Maamulka kheyraadka biyaha ee dalka loo soo gaabiyo WRA ayaa soo saaray digniin kuadan in biyo xireenka Turkwel uu buuxsamay islamarkaasina uu dhowaan biyaha sii deyni doono taasi oo dadaad xoogan abuuri karto .
Maamulka keyraaka biyaha ee dalka loo soo gaabiyo WRA ayaa bartiisa tweetarka ku sheegay in biyo xireenkani Turkwel uu buuxsamay islamarkaasina uu ku fatahi doono degmooyinka uu dhow inta u dhexeysa maanta ilaa Talaadada inagu soo adaan markaas oo dalka laga xusi doono maalinta Mashuja day .
Madaxa fulinta ee Maamulka keyraaka biyaha ee dalka loo soo gaabiyo WRA Mohammed Shurie ayaa sheegay in dadaadkani ay cagta marin doonan ku dhawaad shan degmo halka ay ku barakici doonan 300,000 oo qof oo ku nool goobaha uu dhow biyo xireenka Turkwel.
Degmooyinka digniintani adag loo diray ayaa kala ah Katilu, Lodwar, Kalemnyang, Loyapat, iyo Nakwamoru.
Shacabka ku nool degmooyinka uu nuqul dadaadka in ay ka guuran oo ay uu guuraan goobo ay ku badbaadi karaan .
← DHAGEYSO:Barnamij gaar ah oo kusabsan Kenyanka farahooda ay galeen xogta UNHCR
Naby Keita oo seegi doono kulanka Liverpool Vs Everton. →